Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 06/03/2020)
Le dolophu kukho isibini iilwandle ebetha kwidolophu endala enhle. Abantu abaninzi ukuya ku Sorrento, hayi kuba ulwandle kunye emaweni enkwantyisayo, kodwa imbali. Sorrento ngokwenene idolophu quintessential endala Italian. It mncinci kakhulu Naples kwaye ukuba yinyaniso omdala umoya Italian Italian izixeko ezincinane kuphela yelasezantsi linokuba.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Best Uhambo Usuku Ukusuka Naples In Italy” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-naples%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imini yohambo europetravel ukulenza Naples napoli Tranride tips uloliwe travelitaly traveltips